Iyo goho curve inotarisira inotevera inotevera hupfumi | Ehupfumi Zvemari
Ive nekuchenjerera kwazvo mukati megore rino umo dambudziko nyowani kana hupfumi hwehupfumi hungazobuda. Izvi zvinoonekwa mushure mekushanduka kwegove curve umo zvinoratidzwa kuti irikuberekerwa muUnited States munguva isingadariki makore maviri. Yekutanga data iyo inoratidzwa mune ino yehupfumi paramende chinhu chakakosha senge icho icho musiyano pakati pe5 ne3 makore bond yakatoiswa mari. Chiratidzo chakakosha kwazvo nezve zvinogona kunge zviri mumisika kubva zvino zvichienda mberi.
Chimwe chiratidzo chekuti US goho curve iri kupa kune vashoma nevepakati varimi zvakare yakakosha. Izvo hazvisi zvimwe kunze kwekuti kupararira pakati pegumi nemaviri-makore zvisungo zvave pazasi kwazvo kubvira 10. Chimwe chidimbu chedata icho vapindiri vezvemari vanofanirwa kufunga nezvacho pavanosarudza danho rekutora mumisika yemakero kubva panguva dzino. Hongu OK bvisa zvinzvimbo pamusika wemasheya kana zvinopesana nekupindazve kuti uwane yako pachako kana yemari capital ibatsire.
Asi chii chaizvo chiri chiyero chemutero icho vazhinji vezvenhau vane hunyanzvi vari kutaura nezvazvo zvakanyanya? Huye, ichi chitsva chimiro chemari hachisi chinhu chakaderera pane icho kusiyanisa pakati pekubatsira inopihwa neyaka-gumi-gore rinotonga chisungo (-refu-izwi rezita) yenyika yeNorth America uye kufarira kwepepanhau re-10-gore (pfupi-temu). Huye, ichi chiratidzo chekushaya simba mumisika yemari chakarasikirwa ne2 hwaro mapoinzi vhiki rino. Chikamu chequotation chakange chisati chaonekwa kubvira 11 na2007.Nguva iyo dambudziko rekupedzisira rezvehupfumi nemusika wemari rakasimukira, iro rakakanganisa nyika yepasirese uyezve, misika yemari.
1 Kukosha kweiyo goho munyonga
2 Ngozi dzekuuya kwemari kuri kuuya
3 Chinhu chisina kuburitswa kusvika ipapo
4 Rate kukwira muUS.
5 Mhedzisiro kukondinendi yekare
6 Matipi ekuita pamusika wekutengesa
Kukosha kweiyo goho munyonga
Kukosha kweiyi paramende yehupfumi kwakanyanya kwazvo uye kuri nekuda kwekuvimbika kwakanyanya mukuwongorora kwayo. Ine nhanho yakafanana chaizvo neiya inomiririrwa ne ngozi yepamberi munzvimbo yese yeeuro. Iko, semuenzaniso, chisungo cheSpanish chakapararira pamusoro pe300 hwaro poindi chingamiririra njodzi yakatanhamara, zvese kune hupfumi hwenyika uye kumisika yemari munzvimbo ino. Shanduko yaro, nekudaro, yakafanana chaizvo pakati pe data rezvinoreva. Nemhedzisiro iyo vese vatengesi vanoziva panguva ino.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zvekutarisa kune iyo goho curve mune imwe yehupfumi hwakasimba pasirese. Nekuti inogona kupa imwe chiratidzo nezve chii mafambiro ari kuita hupfumi uye semhedzisiro, zvakare basa iro misika yezvemari ichaita mumwedzi inotevera. Izvo, iwe unenge uine chakanyanya kukosha chikonzero chekuita sarudzo mumisika yemari. Kwete chete kubva kuequity, asiwo yakagadziriswa mari, sezvakaitika mumakore achangopfuura.
Ngozi dzekuuya kwemari kuri kuuya
Chero zvazvingaitika, goho rakakombama anofungidzira chiitiko chitsva icho chinoreva nguva yekumusoro yemisika yemari munzvimbo ino yeinokosha yakakosha pasirese. Kubva pane akajairika mamiriro, ichi ichokwadi chekuti vashoma nevapakati varimari havafanirwe kubatwa vasina kurinda, nekuti patova nevanoongorora zvemari vakawanda vakayambira nezve mukana uyu mumisika yemari. Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganikwa kuti kuenzana muUnited States kwave nekwaniso yakanaka kwazvo kwemakumi emakore, uko vatyairi vadiki vasingarangarire nguva yezvakawanda zvakawanikwa mumapotifoliyo avo.
MaIndices kune rimwe divi reAtlantic akaonga kubvira 2012 muna hapana chinopfuura 90%, purofiti yakakwira kwazvo yakaita kuti vane mari vane hukasha vane mamirionea. Nekuti patove nemasheya akamboshanda zvirinani pane akajairwa indices, nekutenda kunyangwe pamusoro pe100% Chinhu chisati chaonekwa kwenguva yakareba uye chakatungamira kukutengwa kukuru mumisika yemari. Nebhuku rekushandira iro rave zvakare rakanyanya kukwirira.
Chinhu chisina kuburitswa kusvika ipapo
Ichi chisina kujairika chokwadi mumisika yemasheya yeAmerica chakatungamira kune idzi nzvimbo dzekuwedzera dzinofanirwa kugadziriswa. Uye sezvo pakange pasina kugadziriswa kwehukosha hwakakosha pakati, hazvishamise kuti zvinoitika zvemusika wekuenzanisa zvinogona kuchinja chero nguva, kunyangwe nesimba guru kupfuura kudiwa kubva pakutanga. Panguva ipi neipi, pane chimwe chinhu chiri kusachinja panguva ino uye ndechekuti haisisiri nguva chaiyo yekutora zvinzvimbo mumusika uyu wekuenzana. Hazvishamisi kuti njodzi dziri kuwedzera nekufamba kwemwedzi.
Rate kukwira muUS.
Chimwe chezvinhu zvinokonzeresa kuti US musika wemasheya utange nguva yekutenderera ndeyekuti panguva ya2019 pane zvitsva zvinowedzerwa mumutero. Kunyangwe mukana uyu uchideredzwa nemisika yezvemari, hazvisi izvo maererano nehukuru hwayo. Uye chaizvo ichi ndicho chikuru kutya kwevamiriri vemari vakasiyana uye kuti izvi zvisati zvaitika vari kugadzirisa nzvimbo mumusika weUS stock. Hazvishamise kuti, Chipiri chapfuura, huwandu hwenyika ino hwakaderera neasina kusvika 3% nekuda kwekuona kwechiitiko ichi chitsva.
Nechekare, vaongorori vari kupa kukosha kwakanyanya kune izvo zvinoratidzwa nemutengo wemari yekufarira uye chiziviso chayo chekudzikira kwehupfumi muUnited States mukati memakore maviri. Kunyangwe hazvo chokwadi chekuti macroeconomic dhata epasirese epasi achiri pachena. Iko iyo huwandu hwevasina mabasa mumwedzi gumi nembiri yapfuura yakadzikiswa kusvika padanho risingafungidzirwe nehupfumi hwakanyanya pasi. Kunyangwe pane izvo zvinopesana, kukura kwenyika kunoenderera padanho rinoyemurika, sekucherechedzwa neanonyanya kukosha hupfumi munyika.
Mhedzisiro kukondinendi yekare
Chimwe chinhu chiri kujekeswa panguva ino mhedzisiro iyo kuderera kwehupfumi uku kungave kune nyika dzenzvimbo ye euro. Izvo hazvaizove zvakanyanya sekutarisirwa nemamwe masangano uye zvakati wandei zvine chekuita nekushanduka kwemisika yemari. Tsananguro inonzwisisika inofanirwa kutsvaga mukushanduka kwemisika miviri yezvemari, iyo yanga isina kuenzana zvishoma maererano nehukuru hwekuwedzera kwemitengo yezvikamu. Kwete pasina, iyo kukwira kumusoro mumisika yemasheya yekondinendi yekare vanga vari vakadzikama zvakanyanya kupfuura muAmerican.
Ehe, vatengesi veEuropean havana kuita mari yavo yavanobhadhara zvakadaro nerudzi urwu rwekudyara. Kusvika pakuti mune imwe nzira inotungamira akaoma mitezo kubvira kupera kwa2016. Kunyanya, yakasarudzika misika yemasheya indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, iyo yakarasikirwa nenzvimbo munguva ino uye yaifanirwa kushanyira nhanho dzisingaonekwe mumakore apfuura, senge 8.600 mapoinzi iyo yashanyira mumakore apfuura. Gumiguru gore. Neichi chikonzero, zvinokwanisika kuwira mumusika wekutengesa zvichave zvakanyanya nuanced, mumaonero echikamu chikuru chevanoongorora zvemari.
Matipi ekuita pamusika wekutengesa
Chero zvazvingaitika, hapazovi neimwe mhinduro kunze kwekutora nhevedzano yezviyero zvine chinangwa chikuru kuchengetedza mari yedu kubva kune zvinogona kuitika mumisika yemari mumwedzi inotevera. Nekutora pachena kwemazano anotevera atinoisa muchinyorwa chino pazasi.
Zvichava zvakawanda kunyanya kusarudza kugadzira yedu inotevera yekudyara portfolio kubva ikozvino zvichienda mberi, ese marekisheni esposheni zvirevo hazvichazoshanda sezvazvakaitika kusvika ikozvino.
Hakuzovi nemimwe mhinduro kupfuura kusiyanisa mari pamusika wemari pamwe newemamwe maaseti emari senzira yekuwana mihomwe yemari kubva kune mashandiro akaitwa.
Iko mashandiro mumusika wemasheya achafanirwa kuve Nokukurumidza uye tarisa mazwi mapfupi ehutongi kuitira kuti usabatwe munzvimbo dzakashama.
Hapana mubvunzo kuti iyi nguva nyowani ichaunza nyowani mabhizimusi mikana Vachafanirwa kuonekwa kuti vatore mukana wechiitiko ichi chingamuka kubva zvino zvichienda mberi.
La kusimba kwekudonha inogona kunyanya kuita zvechisimba uye nekuda kweichi chikonzero kungwarira kunofanirwa kuve dhinomineta muzviito zvevashambadzi vadiki nepakati.
Inogona kunge iri nguva yeku kubuda mumisika yezvemari uye unakirwe nezvakawanikwa zvakaunganidzwa kusvika zvino. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Kubva ikozvino zvichienda zvichanyanya kuomarara tora kudzoka inopihwa neyakaenzana mumakore apfuura uye saka zvichave zvakafanira kurarama neichi chiitiko chitsva mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo goho curve inotarisira inotevera inotevera hupfumi
Mamiriro ezvinhu ekutora marovha ebhenefiti